Siyaasi ku xiran magaalada Boosaaso oo wajahaya xaalad caafimaad – Hornafrik Media Network
Siyaasi ku xiran magaalada Boosaaso oo wajahaya xaalad caafimaad
Saraakiil ciidan oo diiday in magacyadooda la xigto, ayaa warbaahinta deegaanada Puntland u sheegay in Dr Muuse Cali Jaamac uu ku xanuunsanyahay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso oo maalmihii la soo dhafay uu ku xirnaa.
Sarkaal ka tirsan ilaalada xabsiga ayaa sheegay in mudo seddax jeer ah uu xabsiga ku xanuunsaday Siyaasi Muuse Cali Jaamac, isla markaana aan halmar xataa loo fidin wax gargaar caafimaad ah.
Sidoo kale qaar kamid ah dadka sida aadka ah uga ag dhaw Dr Muuse Cali, ayaa sheegay in xanuuno dhawr jeer soo wajahay siyaasigaas aan marnaba loo fidin wax gargaar caafimaad ah, iyagoo walaac ka muujiyey caburin ay sheegeen inay xukuumadda madaxweyne Dani kula dhaqmayso waxgaradka gobolka Bari.
Xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, waxa hadda ku xiran siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo afar Nabaddoon, oo dhammaantood loo haysto dhaliilo ay u jeediyeen heshiisyo xukuumadda Puntland kula jirto shirkado laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta oo ay ugu horeyso DP World.
Ku dhawaad 20 ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Suuriya.